Dhaabbata caalbaasii Oppiretarummaa Telekoomii injifate dolaara mil. 850 mootummaaf galii godhe
6 months ago 487 Qoodi
Itoophiyaa keessatti damee Oppiretarummaa Telekoomii dhuunfaatti hirmaachuuf caalbaasii bahe kan injifate walta'iinsa dhaabbilee telekoomii shan 'Global Partnership for Ethiopia' qarshii caalbaasicha ittiin injifate dolaara miiliyoona 850 mootummaaf galii taasisuusaa Abbaan Taayitaa Komunikeeshinii Itoophiyaa beeksise.
Daayirekatti olaanaa Abbaa Taayitichaa Injinar Baalchaa Reebaa akka himanitti, akkaataa sanada caalbaasichaan dhaabbanni caalbaasicha injifate guyyoota 14 osoo hin guutiin maallaqa caalbaasii kana ittiin injifate mootummaaf galchu qaba.
Haaluma kanaan dhaabbata 'Global Partnership for Ethiopia' maallaqa caalbaasicha ittiin injifate dolaara miiliyoona 850 mootummaan galii taasisuusaa Injinar Baalchaa ibsaniiru.
Dhaabbatni caalbaasii injifate kun adeemsa caalbaasichaaf dhaabbilee maallaqaa Ingiliizii fi Ameerikaarra liqii dolaara miiliyoona 500 argateera.
Akkaataa ibsa Injinar Baalchaa, caalbaasii oppiretarummaa telekoomii lammaffaa baasuuf qophii godhamaa jira. Caalbaasicharratti kallattiiwwan pooliisii haaraa akka ni kewwamu jedhame kan eegamu yoo ta'u, carraa diriirsa bu'uraalee misoomaarratti hirmaachuu isaani ilaalamu ni danda'a jedhaniiru.
Global Partnership for Ethiopia Diinagdee Teeleekoom
Aug. 3, 2021, 9:25 a.m.
Baankiin Gadaa Adooleessa 29, 2013 akka hundeeffamu ibsame